महिनाको अनुप्रयोग: फेब्रुअरी 2016 - समाचार नियम
यो दर्शक अनुप्रयोगहरू समीक्षक सुझाव 10 अनुप्रयोगहरू र 10 उहाँले यो महिना पत्ता मोबाइल खेल, बाट लोनली प्लानेट गाइड तपाईंलाई एक अखबार सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ एक खेल अफलाइन भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ
शीर्षक यो लेख “महिनाको अनुप्रयोग: फेब्रुअरी 2016” स्टुअर्ट Dredge द्वारा लेखिएको थियो, सोमवार 15 फरवरी मा दर्शक लागि 2016 08.00 UTC
एक्लो ग्रह द्वारा गाइड
लोनली प्लानेट देखि यात्री लागि नवीनतम अनुप्रयोग, यो एक राम्रो गर्छ - र मुक्त! - यसको पुस्तकहरू देखि सानो पर्दामा शहर गाइड केही स्थानान्तरणका को काम. शहर दर्जनौं शुरू मा उपलब्ध छन्, एक उपयोगी स्पर्श - तपाईं अफलाइन भण्डारण गर्न सक्ने नक्सासहित.
धेरै म्याक प्रयोगकर्ता एक समय को लागि वाहन गरेको slick डेस्कटप इमेल सफ्टवेयर बारे ज्ञात छ. अब यो iPhone को लागि एक उत्कृष्ट संस्करण पायो गर्नुपर्छ. यो धेरै लोकप्रिय इमेल सेवा संग काम गर्दछ, आफ्नो इनबक्स व्यवस्थापन गति विशेषताहरू प्रशस्त छ, र पनि एक चिटिक्क एप्पल वाच अनुप्रयोग छ.
यो अद्भुत छोराछोरीको अनुप्रयोग iOS मा एक समय को लागि बाहिर छ, तर एन्ड्रोइड नयाँ छ. यो टचस्क्रिनहरूको लागि डिजाइन एक अन्तरक्रियात्मक वर्णमाला छ, एनिमेशन तिनीहरूले ट्याप गर्नुहोस् र अक्षर आफ्नो बाटो स्वाइप रूपमा बच्चाहरु को लागि शब्द illustrating संग.
अर्को अनुप्रयोग belatedly एन्ड्रोइड गर्न यसको बाटो बनाउन, यो crowdfunding सेवा Kickstarter पर्छ. यो पैसा जुटाउने प्रयास नयाँ परियोजनाहरू ब्राउज गर्न ठूलो तरिका हो, साथै साथीहरूले के ब्याक छन् हेरेर रूपमा.
त्यहाँ छन् अनुप्रयोगहरू र ग्याजेटहरू प्रशस्त - र अक्सर अनुप्रयोगहरू संग गैजेट्स - आफ्नो कदम ट्रयाक र तपाईं अधिक सक्रिय प्राप्त सहयोगको लागि. Movesum एक स्मार्ट मोड छ, कति क्यालोरी देखाउन आफ्नो पैदल जलाइएको छ, र आफ्नो दैनिक लक्ष्य संशोधन तपाईं प्रोत्साहन गर्न.
स्याउ देखि एक ब्रान्ड नयाँ संगीत अनुप्रयोग, तर गीतहरू रेकर्ड भन्दा तिनीहरूलाई सुनेर लागि. सबै स्तर को गीतकार उद्देश्य, यो तपाईं रेकर्ड गीतहरू वा छोटो विचार गर्न मद्दत गर्छ, भर्चुअल ढोल बजाउने व्यक्ति र bassist थप्न; तिनीहरूलाई पछि पत्ता लगाउन क्लिप ट्याग; त्यसपछि निर्यात वा साझेदारी.
एक पटक: भएकोसँग प्रति दिन
चकमक डेटिंग लागि सहरमा मात्र अनुप्रयोग छैन. एक पटक गरेको schtick तपाईंले एक खेलमा हरेक दिन सुझाव छ: तपाईं एक अर्को मात्र देख्न सक्नुहुन्छ, बस बाहिर मदत अल्गोरिदम भन्दा मानव matchmakers को प्रतिज्ञा संग.
PLAYLIST एक दिन
"एक दिन" स्पष्ट एक विषय यो महिना छ. यो अनुप्रयोग वार्नर संगीत समूह आउँछ, हरेक नयाँ संगीत बजाउने प्रदान 24 घण्टा. तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्न तिर्ने Spotify सदस्य हुन आवश्यक छ, र सुविधा वार्नर गरेको कलाकारहरूको प्रशस्त आशा.
Millie MAROTTA गरेको COLOURING Adventures
अब टाढा हेर वयस्क रंग पुस्तकहरू लागि प्रवृत्ति आफ्नो बाख्रा हुन्छ भने: यो आईप्याड गर्न विचार लिन्छ. तपाईं रङ लगाउन गरिरहनु भएको चित्र सुन्दर छन्, हुनत: व्याख्याता Millie गरेको लोकप्रिय पुस्तकहरू काम देखि प्रकृति तस्बिरहरू. अन्य अनुप्रयोगहरू यो के, तर यो वास्तविक रंग जस्तै सबैभन्दा महसुस.
यो Microsoft मा सबै काम छैन: तपाईं उठ्नु लागि प्रविधी विशाल गरेको प्रयोगात्मक अनुप्रयोग टोली एक नयाँ तरिका छ. अनुप्रयोगका अलार्म घडी बन्द गर्न, तपाईं "को नकल" कुरा छ: एक निश्चित वाक्यांश भन्दै एक निश्चित अनुहार खींच देखि. बेवकूफ? अलिकति, तर यो तपाईं उठ गर्छ.
– गेमिङ अनुप्रयोगहरू –
एक "शिल्प आरपीजी" रूपमा यसको विवरण Minecraft को स्मरण गराउन सक्छ, तर Crashlands फरक जनावरको छ. एक विदेशी ग्रहमा दुर्घटना-अवतरण गरेपछि, तपाईं उपकरण लागि forage छ, युद्धमा वन्यजन्तु र एक gripping कथा uncovering गर्दा आफ्नो आधार निर्माण. एक वास्तविक उपचार.
तपाईं puzzlers चाहनुहुन्छ तर मिलान-तीन "सागा" सूत्र को लत्तो छन् भने, दुइटा इंक को विषको असर रोक्ने औषघि छ. यो तपाईं स्क्रिनको माथि बारहरू अप भर्न आफ्नो औंला रंग वर्गहरूको लाइनहरु tracing देख्नुहुन्छ, झन् कठिन "चाल" सीमा विरुद्ध. मूल, र धेरै लत.
त्यो वेस्टपोर्ट स्वतंत्र
कागजात, कृपया सबैभन्दा लाग्यो-प्रोभोकिंग मोबाइल खेल को एक रहिरहन्छ, र यो नै कपडा काट्न छ. तपाईं तानाशाही मा स्लाइड एक "युद्धपछिको" देशमा एउटा अखबार सम्पादन, र शीर्षकहरू स्वाप र तपाईं फिट हेर्नुहोस् रूपमा कथाहरू सेन्सर छ. वा, तपाईं साहसी हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई एक्लै छोड्न ...
तपाईं स्पेक्ट्रम घर कम्प्युटर को युग मा हुर्केको भने, Downwell गरेको रेट्रो ग्राफिक्स नोस्टाल्जिया को pangs ल्याउनेछ. तर पनि छैन भने, यसको सरल तर चतुर झर्ने-तल-एक-राम्रो गेमप्ले तपाईँले मा एक हिज्जे डाली हुनेछ. तिमी खेल्न रूपमा शक्ति-अप एक प्रमुख भूमिका निर्वाह, मर्न र बारम्बार.
Kittens Exploding Kickstarter मा $ 8.8m को ट्युन गर्न आर्थिक सहायता थियो कि एक विचित्र कार्ड खेल हो. त्यो सफलता यसको निर्माताहरू एक मोबाइल खेल यसलाई बारी मदत गरेको छ, जो सिर्फ मजा. चेतावनी दिएको छ: तपाईं यसलाई आफ्नो आईफोनहरु पनि खेल्न मा स्थापित दुई खेलाडी आवश्यक.
मृतकको को Adventures
को अन्तिम काल्पनिक कन्सोल RPGs को प्रशंसक संभावना प्रशस्त आफ्नो मोबाइल उपकरणहरूमा श्रृंखला मा पुरानो खेल खेल्न छन्. एक खेल बढी आकस्मिक खेलाडीहरू थाहा नहुन सक्छ कि - - मृतकको को साहसिक नवीनतम remake छ र आरपीजी इतिहास को एक रंगीन स्लाइस प्रदान गर्दछ.
उल्टा: आधिकारिक अनुप्रयोग
मान्छे प्रशस्त उल्टा प्ले आफ्नो सोफे मा - टिभी खेल शो आफ्नो टाउको मा साथ खेल्दै द्वारा. अब वैकल्पिक त्यहाँ: यो आधिकारिक मोबाइल खेल, अक्षर र नम्बर राउंड्स साथै समाधान गर्न conundrums संग. यो राम्रो काम गर्दछ, एक दुई-खेलाडी-मा-एक-यन्त्र मोड सहित.
तपाईं पहिले नै वयस्क तैरने गरेको रिक र Morty कार्टून परिचित हुनुहुन्छ भने तपाईंले यो खेल को बाहिर सबै भन्दा प्राप्त, तर यो पनि newcomers लागि रमाइलो छ. Unashamedly Pokemon प्रेरित, यो हास्य भरिएको गर्नुपर्छ तपाईं Morty चरित्र फरक संस्करण पकड र प्रशिक्षण रूपमा.
एक मंच खेल मा एक नयाँ मोड चाहनुहुन्छ? यसले प्रदान: आफ्नो सानो छडी-वर्ण चल्छ र सर्कलमा एक श्रृंखला वरिपरि Leaps, शत्रुहरू परहेज गर्दा केन्द्र मा आफ्नो बाटो काम. यो पहिला कठिन देखिन्छ, तर तपाईं ताल गर्न प्रयोग प्राप्त, यो एक सशक्त चुनौती हुन्छ.
शहर-निर्माण रणनीति मा एक आविष्कारशील नयाँ ले मोबाइल मा एक परिचित विधा बन्न कि. यो खेल, प्रसिद्ध खेल ब्रान्ड एटारी देखि, को LGBTQ celebrates (लेसबियन, समलिङ्गी, बिसेकषिल, transgender र Queer) समुदाय, यसको centrepoints रूपमा शान चाडहरूमा संग पूरा.
27005	7 एन्ड्रोइड, अनुप्रयोग, महिनाको अनुप्रयोग, लेख, विशेषताहरु, खेल, IOS र, पर्यवेक्षक टेक मासिक, स्मार्टफोन, स्टुअर्ट Dredge, प्रविधि, यो दर्शक
← धेरै न्यूरन्स स्मृति बिगार्छ4रियल उडान कार वास्तवमा फ्लाई त्यो [भिडियो] →